Myanmar erotic stories. The neighbor's boy. 2019-01-19
Myanmar erotic stories. Siblings 2019-01-19
Myanmar erotic stories Rating: 9,2/10 1677 reviews
Myanmar Erotic Stories: September 2015
အဲ့လိုရယ်သံလေးစွက်ပီးပြောရင်း အိပ်နေရာက ထထိုင်ပီး ဆံပင်ရှည်လေးတွေကိုလက်နု့သပ်ရင်းရှင်းနေတယ်။ ကျနော့်မျက်နာကိုတော့ပြံုးပီး ငေးနေတာပေါ့။ ပုဆစ်တုတ်လေးထိုင်နေတဲ့ ကျနော့်ချစ်သူလေးကတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်မျက်နာလေးက အေးချမ်းပီးဖြူ စင်လိုက်တာ။ ကိုယ်လုံးလေးကလည်း ကျနော်ပြောဖူးသလိုတကယ့် ကျောက်ဖြူသားနု့ထုဆစ်ထားတဲ့ ခေါမနတ်မိမယ်ရုပ်ထုလေးအတိုင်းပဲ။ ဆံပင်တွေကိုရှင်းပီးတော့ ကျနော့်ဗိုက်ပေါ်လှန်ပီး တင်နေတဲ့ကျနော့်ညီလေး ကိုလှမ်း ကိုင်ကြည့်ပီး ဟိုက်! လို့ဘယ်သူကကောထင်ထားမလဲဗျာ။ ဆောင်းအကုန်နွေအကူး မအေးလွန်း မပူလွန်းသေးတဲ့ နေထိုင်လို့ကောင်းရုံနေ. အလိုလိုစီးကျလာတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ။ တချိန်လုံးနာနာကျင်ကျင်နု့နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ကျနော့် ဆရာမလေးရာ။ အဲ့ဒီမနက်ကကော သူထွက်သွားခဲ့တာစိတ်ဖြောင့်ခဲ့ရု့လားဗျာ။ သူ. ဆိုတဲ့ ချစ်စဖွယ် ရမက်သွေးြွကဖွယ် ညည်းသံလေးထွက်ပါလာပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အထိအတွေ့တွေကြောင့် ဇော်ဇော်တယောက်သူ့လီးကြီးကို အဆုံးထိဆောင့်ချ လိုက်ပါတော့တယ်။ အား. ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအရှက်လုံစရာအဝတ်ရယ်လို့ဘာမှမပါတဲ့ကျနော်နု့ဆရာမလေးတို့ပူးကပ်ပီးဖက်ထားရင်းလှဲလျောင်းနေကြတယ်။ ခပ်စိမ့်စိမ့်အေးနေတဲ့ရာသီဥတုကို ကျနော်တို့မမှုပါ။ ၂ယောက်သားစကားမဆိုဖြစ်ပဲတုန်ခါနေတဲ့ရင်ဘတ်ချင်း ပူးကပ်ထားပီးနှလုံးသားချင်း စကားတွေပြောလို့ပေါ့လေ။ ကျနော့်အပေါ်မှာထပ် လျှက်မှောက်အိပ်ထားတဲ့ အန်တီလေးရု့နှုတ်ခမ်းပျော့အိအိလေးက ပက်လက်အိပ်ထားတဲ့ကျနော့် နားရွက်တွေကိုခပ်ရွရွလေးတချက်တချက်နမ်းနေတယ်။ သူ. အညိုရေနွေးပူပူလေးလာတိုက်မယ်စောင့်နေလို့ ပြောရင်းမီးဖိုချောင်ထဲဝင်သွားတယ်။ မညိုညိုရဲ့အိပ်ခန်းထဲကျနော်ဝင်ပီးရေစိုဘောင်းဘီတိုနဲ့အတွင်းခံကိုချွတ်ချ လိုက်ပီးသူ့ကုတင်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့တဘက်ဖြူဖြူလေးကိုပတ်ပီးအိပ်ခန်းပြူတင်းပေါက်ကိုပိတ်လိုက်တော့ အခန်းထဲ မှာမှောင်သွားတာနဲ့မီးချောင်းခလုတ်ကြိုးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ မညိုညိုရဲ့ကုတင်ပေါ် တင်ပါးလွဲထိုင်နေရင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကငါ့အမပါဆိုပီးစိတ်ကို တင်းထားလိုက်တယ်။ ခဏလေးနေတော့. လို့အော်ပီးပြေးလာမှ မေမေဟာကျနော့်ကိုပြေးဖက်ပီးငိုရှာတယ်။ အိမ်ထဲဝင်လာတော့ ထုံးစံအတိုင်းစာအုပ်ထူထူကြီးထဲ ခေါင်းငိုက်စိုက်ထားတဲ့ဖေဖေက ခွေးသားလူမိုက်ပြန်လာသေးတယ်ပေါ့လို့စိုက်ကြည့်ပီးပြောတော့ ကျနော်သိမ်ငယ်စွာနု့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်မိအောင်မျက်နာလွှဲလိုက်ရင်း ကျနော့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်မိတယ်။ ကျနော့်အိပ်ခန်းလေးထဲကိုအထုတ်အပိုးတွေဆွဲရင်းဝင်လာမိတော့ အရာရာအရင်တိုင်းပဲဖြစ်နေတာသတိထားမိတယ်။ ကျနော့်ကုတင်ဘေးကနံရံမှာကပ်ထားတဲ့ ကျနော်ကိုယ် တိုင်ခဲကောက်ကြောင်းခြစ်ထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးထဲက ဆရာမလေး.
ဘာမှမပြောနဲ့ လို့ဆိုပြီး ကြီးမားလှတဲ့ လီးကြီးကိုစတင်ပြီးဆော့ကစားပေးလိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အစွမ်းကုန်တောင်လာပါတော့သည်။ နောက်တော့မကြီးလည်း ပါးစပ်လေးကို ဟပြီး ငုံပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစွမ်းကုန် ပညာကုန်ပြုစုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အား. အနားမှာမညိုညိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိ ကြောင့်ထိန်းတာဘာညာရှိသေးတယ်။ ခုကတော့ တစ်ခြံလုံးမှာ ၂ယောက်ထဲဆိုတဲ့ အသိရယ်၊ အန်တီလေးပြန်မလာခင် အညိုပျော်ပါစေဆိုတဲ့အသိရယ်ကြောင့် ကျနော်အညိုနု့နေချင်သလိုနေခဲ့ တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ဗျာ။ အညိုကသွေးသားဆူဖြိုးစအရွယ်ကောင်း၊ကျနော်က တက်သစ်စလူငယ်လေး. ကျနော့်လက်က ချိန်းကြိုးရာတွေကို တင်ချာဆေးရည်တွေဂွမ်းနဲ့သုတ်ပီး ပွတ်ပေးတော့ အား!! ဘာလုပ်ရပါ့။ နောက်တခုက မြင်လိုက်ရတဲ့ ဖေ့ရဲ့ ပစ္စည်းကြီးကလည်း မြင်ဖူးသမျှထဲမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောနိုင် တာကြောင့်လည်းရင်ခုန်နေမိပါသည်။ နောက်ဆုံအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကို စဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဖေ ကဘာ့ကြောင့် သူ့ပုံကိုကြည့်ပြီး လုပ်နေရတာလဲ။ ဖေ တကယ်ပဲ သူ့ကို. ဆံပင်ကိုဖြေချထားပီး အပေါ်ကခါးတိုအင်းကျီလေးကိုချွတ်ထားပီး ထမီကိုရင်ခေါင်းလျားထားတယ်။ အနက်ရောက်ဘရာကြိုးလေးက ပုခုံး၂ဖက်အပေါ်မှာထင်းထင်းလေး ဖြစ်နေလို့ပေါ့။ ရော့မောင်. အေးဟုတ်တယ်ဟာ ငါတို့မောင်နှမ အဲလိုဖြစ်နေတာ သုံးလလောက်ရှိပြီ။ နင်တို့ရော ကြာပြီလား အင်းငါတို့က ခြောက်လလောက်ရှိပြီဟ။ နင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဟင်။ အစကတော့ငါစိတ်ညစ်တာပေါ့ဟာ။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာတမိုျးကြီးပေါ့။ ကြာလာတော့လည်း ဟိဟိ ကောင်မ ဟွန်း ကြိုက်သွားတယ်ပေါ့။ အောင်မာ နင်ကျတော့ရော ဟဲ့ ဇော်ဇော်က နင့်ကို ဟိုဟာဖြစ်ချင်နေတာသိလား။ နင်ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ အမယ်လေး ဟိုဟာတွေ ဘာတွေပြောနေပြန်ပြီ။ လိုးချင်နေတယ်လို့ပြောစမ်းပါ။ ဒီနားဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ ငါ့မောင်ကရောဘာထူးလို့လဲ နင့်ကိုလိုးချင်နေတာပဲဟာကို။ အေးလေငါ မနက်ကစဉ်းစားကြည့်တာရင်တော့ခုန်တယ်ဟ။ သူတို့သာအတင်းအကျပ်တောင်းဆို လာရင် ငါကတော့ လိုက်လျောရမှာ။ ဒီလိုနဲ့ ညနေအိမ်ပြန်လာတော့ ဇော်ဇော် တယောက်က ပြန်ရောက်နှင့်နေပါပြီ။ မကြီး လာပါဦး အနားကို။ နေစမ်းပါဦးဟယ် မောရတဲ့ကြားထဲ။ လာပါဟာ။ မကြီးလဲ ပြောပြောဆိုဆိုအနားရောက်လာတဲ့မကြီးရဲ့ တင်ပါးကြီးကိုအားရပါးရ ဖြစ်ညှစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အိတင်းနေတဲ့တင်ပါးကြီး ဟာဘယ်အချိန်ကိုင်ကိုင် ကိုင်မဝဖြစ်နေပါတော့တယ်။ အားရအောင်ကိုင်ပြီး တဲ့နောက်တော့ လက်တွေက ရင်သားတွေဆီရောက်လို့သွားပြန်ပါတယ်။ ဝတ်ထားတဲ့ကျောင်းအင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေတလုံးချင်းဖြုတ်လိုက်တော့ ဘော်လီအဖြူလေးနဲ့ ရင်ညွန့်လေးပေါ်လာပါတော့တယ်။ နော်ကတော့ ဇော်ဇော်တယောက်စိတ်ကူးပေါက်သွားပြီး မကြီးရေခိုျးရအောင်ဟာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ အင်းကောင်းသားပဲ ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား ရေခိုျးခန်းဆီကိုဦးတည်လိုက်ပါတော့တယ်။ ရေခိုျးခန်းထဲအရောက်မှာတော့ ရေပန်းဖွင့်ပြီး ဇော်ဇော်ကမကြီးကိုရေအရင်လောင်းပေးပါတယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလောင်းပါတယ်။ မကြီးတကိုယ်လုံးကိိုလည်း ပွတ်သတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဆပ်ပြာဗူးကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး။ မကြီး ဆပ်ပြာတိုက်ပေးမယ်နော် ဆိုပြီး တကိုယ်လုံးကိုပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်နဲ့ပေါင်တန်တွေကိုသေချာ ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်တော့ ချစ်စဖွယ် ညည်းသံလေးက ထွက်လာပါတော့တယ်။ ရေပြန်လောင်းပြီးတဲ့နောက်တော့ စောက်ဖုတ်ကို အပြီအပြင်လျှက်ပေးလိုက်ပါတော တယ်။ အား.
ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အပျိုကြီးေ-ာက်ဖုတ်နွေးနွေး ကြီးကိုနို့၂လုံးစုံကိုင်ပီးဆောင့် -ိုး နေရတာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေးသာကြည့်ကြပေရော့။ အသာလေးအဲ့လိုဆောင့်နေရာကနေ. မောင်ရင်နု့ငါ့အဖို့မှာတော့ ဆန်ဆုံစားလို့ကံကုန်သွားပီပေါ့ကွာဆိုပီးနှုတ်ဆက်ရှာတယ်။ ကျနော်စိတ်ထိခိုက်လို့ဘာမှပြန်မပြောပဲ ခရီးဆောင်အိတ်ကလေးကိုဆွဲပီး ထွက်လာတော့လှမ်းအော်သေးတယ်. ဥပမာ့ေ-ာက်ဖုတ်သစ်ရွက်လုပ်ရခက်၊ေ-ာက်ဖုတ်မုန့်ပေါင်းလုပ်လို့ကောင်း၊ ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောစုံနေတဲ့လိင်ပညာပို့ချချက်တွေနဲ့ သူတို့ကိုဆရာတင်ရတဲ့ကာလပေါ့။ ဆရာမောင်ထင်ရဲ့ကိုဒေါင်းဝတ္ထုတွေထဲက ကာလသားကြီးကိုဒေါင်းလိုလက်ချာပေးတဲ့ဆရာသမားတွေပေါ့။ခုပြန်ပြောရင်းတောင်သူတို့တွေကိုသတိရလိုက် တာဗျာ ။ ကဲထားပါတော့ဗျာ။ လိုရင်းမရောက်ပဲတော့ပစ်ချော်နေပီ. ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲကျနော်မတွေးတတ်သေးဘူးဗျာ။ ဖေဖေနု့မေမေလည်းမျက်နာမကောင်းကြဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က မှုန်တေတေမျက်နာနု့နေလာတာရက်တွေကြာ လာပီကော။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားရင် လူဆိုတာအသက်ရှင်နေရက်နု့ဗလာကြီးဆိုတာပိုပိုသိလာတယ်ဗျာ။ တခါတလေဆို မနက်စောစောထပီးအန်တီလေးကြိုက်တဲ့ စံပယ်ပွင့်လေးတွေစျေးထဲ ကဝယ်. ဆိုပီးလျှာလေးတစ်လစ်ထုတ်ပြပီးအောက်နှုတ်ခမ်းကိုသွားဖြူဖြူလေးနဲ့ကိုက်ထားတာတကယ့်အပျိုပေါက်မလေးကြနေတာပဲ။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ကျနော့်ဖက်ကိုမျက်နာချင်းဆိုင်လှည့်ထိုင်လိုက်ပီးကျနော့်ညီလေးကိုလက်ချောင်းပျော့ပျော့လေးတွေနဲ့သေသေချာချာကိုဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေး တယ်။ ဖူးးးးးးး ့့. အောက်ကကျနော့်ညီလေးကလည်း ဖြောင်းကနဲထောင်ထလာပီ။ ၂ယောက်စလုံးနတ်ပူးသလိုတုန်တုန်ရီရီတွေဖြစ်နေပီ။ ဖယောင်းတိုင်သေးသေးလေးတွေလိုဖြူလွှလွှလေးတွေလို့ထင်ရတဲ့ဆရာမလေးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကကျနော့်ပါး၂ဖက်ကိုတစ်ဖက် တစ်ချက်စီကိုင်ထားပီးကျနော့်နှုတ်ခမ်းကိုသေချာကိုစုပ်ပီးနမ်းနေတာဗျာ။ လူတစ်ကိုယ်လုံးလေထဲရောက်နေသလိုပဲ။ကျနော့်လက်တွေကလည်းအငြိမ်မနေပါဘူးဘလောက်စ်လက်ပြတ်လေးဝတ် ထားလို့ပေါ်နေတဲ့ဆင်စွယ်လိုပြောင်တင်းချောမွတ်နေတဲ့အန်တီဝင်နီ့လက်မောင်း၂ဖက်စလုံးကိုပွတ်၊လက်ကိုအောက်လျှောချပီးတင်ပါးအယ်အယ်လေးကိုစုံကိုင်ပီးချေလိုက်နဲ့အထိအတွေ့ကိုခံ စားနေလိုက်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးရှိန်းတိမ်းဖိန်းတိမ်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ ရုတ်တရက်နမ်းစုပ်နေတာရပ်ပီးမျက်နာချင်းခွါလိုက်တယ်။ အန်တီလေးကျနော့်ကိုအသာလေးတွန်းထုတ်ပီးအိမ်ရှေ့တံခါးမ ကြီးကိုကလန့်ထိုးလိုက်တယ်။ပြူတင်းပေါက်တွေကတော့မပိတ်ဘူးခန်းဆီးလိုက်ကာအစိမ်းလေးတွေကိုချလိုက်တယ်။ ပီးတော့ဧည့်ခန်းစားပွဲပေါ်ကက်ဆက်နီနီလေးကိုကလိနေတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်း လောက်ပဲကြာတယ်.
ဟားးးး ကျနော်ချက်ချင်းသတိဝင်လာတယ်။ အန်တီလေး ကျနော့်ချစ်သူ။ ကျနော်ဘာတွေလုပ်နေမိတာလဲ။ ရုတ်တရက် အညို့ကိုတွန်းထုတ်ပလိုက်ပီးကုတင်ပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ ကုတင်ခြေရင်းမှာပုံထားတဲ့ကျနော့်ရေစိုဘောင်းဘီလေးကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပီး အညို့ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ နားမလည်နိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တဲ့အရှက်မျက်ဝန်းတွေ၊ ဖွာကျဲနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေကြားထဲကနာကျင်နေတဲ့မျက်နာ။ သူငိုနေပီဗျ။ မတတ်နိုင်ဘူးကျနော်ခွေးဖြစ်တော့မယ်။ ထွက်သွားမယ်။ ကျနော်အန်တီလေးကိုပဲချစ်တာ။ မောင်!! မညစ်ပတ်နဲ့ဟာ နာလို့ပါဆိုနေမှ နာရင်အော်ပေါ့ ညှစ်မှာပဲ ပြောမရလဲသဘောပဲဟာ။ အား. အောက်မှာ အိပ်လိုက်၊ မကြီး မောင်လေးကို တက်ခွလိုက်မယ်၊ ဖေက သမီးခွပီး လေးဘက်ထောက်ထားပေးမယ် အဲဒီကျမှ ထည့်ပေါ့၊ မိုးမြင့် မောင်လေး. အဲ့လိုတွေပြောပီးတာနု့ ကျနော်ကုတင်ပေါ်တက်ပီး ပက်လက်လှန်လှဲလိုက်တယ်။ အညိုက တက်လာပီး ကျနော့် ညီလေးကိုသူ. ဖဲကြိုးလေးတွေကြဲချထားတဲ့လမ်းကလေးတွေရှိတဲ့မြို့လို့ စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ကတင်စားဖူးတဲ့ ကျနော်တို့မြို့လေးကလမ်းတကာကိုစက်ဘီးလေးနဲ့လျှောက်နင်း ပီးအန်တီလေးကိုလိုက်ရှာနေမိတယ်။ ဂစ်တာကိုင်ပီး လက်ချောင်းတွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလွတ်ပေးလိုက်တော့လဲ ကြေကွဲနေတဲ့သံစဉ်တွေပဲထွက်ထွက်ကျလာတယ်။ စိတ်ဖြေရာဖြစ်အောင်တနေ့ တနေ့ ဖေဖေတို့အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးနေရင်းတတ်နိုင်သလောက်မေ့ပျောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဆရာမလေးထွက်သွားတာ၂လလောက်ကြာလာခဲ့ပီ။ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ဆိုရအောင်လည်း အဲ့ဒီခေတ်က အဝေးကောလ်တွေက ဝင်ဖို့မလွယ်၊ ရပြန်တော့လည်းကြားတချက်မ ကြားတချက်မို့ဘယ်လိုမှအလွမ်းမပြေပါဘူးဗျာ။ ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့ ဖေဖေခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြို့ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတလောက မိုးတွင်းကြီးကိုတော်တော်လေး ပူနေတာ ၂-၃ရက်ရှိပီ။ ကျနော်လည်းမြင်းခေါင်းတံဆိပ်စွပ်ကျယ်လေးနဲ့ ဘောင်းဘီတိုလေးဝတ်ပီး စက်ဘီးနင်းလာခဲ့တယ်။ ခိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပီးတော့ အိမ်အပြန် ကန်ပတ်လမ်းနားရောက်တော့ညနေ၄ နာရီလောက်ရှိပီ။မိုးကခပ်အုံ့အုံ့ဖြစ်လာလို့ခပ်သွက်သွက်လေး ကျနော့်ပြိုင်ဘီးလေးကိုနင်းနေမိတယ်။ ရုတ်တရက် ကန်ပတ်လမ်းနဲ့ကျောင်းလမ်းထောင့်ကလူပြတ်တဲ့နေရာမှာ လူ၃ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ အနားရောက်လာမှ ဖတ်ကနဲကြည့်လိုက်တော့. မနေ့ညက ဖေ့တချီက သမီး သုံးချီလောက်ကြာတဲ့ဟာကိုများ ဟဲဟဲ အဲဒါက ထိန်းထားတာကိုး သမီးရ.
Myanmar Erotic Stories: ကျနော့်ပီယာနိုဆရာမလေး
လုပ်ပါ သမီးကလည်း ဘာကြာတာမှတ်လို့။ အမလေး ဘာ့လို့မကြာရမှာလဲ. ဖေသူများတွေကိုမပြောရင် ဘယ်သူမှမသိဘူး။ အင်းပါ သမီးရဲ့ ပြောစရာလား။ ဖေ ကျေနပ်ပြီနော်. ကျွန်မက ၅ ပေ ၆ လက်မ. အင် ဆိုပီးညည်းနေသေးတယ်။ ကျနော်သူ့ကိုနည်းနည်းဆွဲခွါပီး နို့ကြီးတွေကိုစပီးစို့တော့ ခေါင်းတခါခါနဲ့ကျနော့်ကိုတင်းတင်းဖက်လာပီး ပြောမိပြောရာတွေအညို့ပါးစပ်ကထွက်လာတယ်။ အားး!! ဒါဆိုလဲလာ၊ စကားများမနေနဲ့´ ဟုခေါ်လိုက်တော့ အကျီကို ကမန်းကတန်းချွတ်ပီးတော့ ကုတင်ပေါ်တက်လာတော့သည်။ ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ ဘယ်လိုနေရမလဲ မသိကြ. ပြိုင်ဘီးလေးကိုနင်းရင်းခြံထဲက လှစ်ကနဲထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်ဟာအရင်အတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ ဆံပင်ဂုတ်ထောက်နု့တီရှပ်အဖြူဂျင်းပန်းအပြာအရောင်လွှင့်ကိုဝတ်ထားတုံးပဲ။ အရင်လိုပဲရင်တွေကတုန်နေတတ်တုံးပဲ။ မြို့ပြင်ကရာဘာခြံသုဿန်ထဲရောက်လာတော့ ညောင်ထောက်ပင်ကြီးအောက်က ဆရာမလေးရု့အုတ်ဂူဖြူဖြူလေးကိုလိုက်ရှာတယ်။ တွေ. ကောင်းမှကောင်းပဲဟေ့။ ကဲကျေနပ်ပြီလား။ မကြီးကအရမ်းလိုးလို့ကောင်းတာပဲဟာ။ အေးပါဟယ် မြန်မြန်လုပ်တော်ကြာ ဖေဖေ မေမေ ကြားသွားလို့ နှစ်ယောက်လုံး ဟုတ်ပေ့ ဖြစ်နေမယ်။ ဇော်ဇော်တယောက် သဘောတွေ့ကြီးတွေ့ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိဆောင့် နေမိပါတော့တယ်။ အား. She got out of bed, threw her silk robe on over her teddy and stomped angrily to the front door of the flat.
ဆိုပီးဆရာမလေးပြံုးနေတယ်။ အဲ့လို၂ယောက်သားသာမန်လူတွေစိတ်မဝင်စားလောက်တဲ့မြူးဇစ်အကြောင်းတွေရောက်တတ်ရာရာပြောနေကြရင်းလောကကြီးကိုမေ့နေကြတာပေါ့လေ။ သိတယ်မလားလောကမှာဝါသနာတူ ဘာသာစကားတူတဲ့ချစ်သူရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကံကောင်းသလဲ။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ အန်တီလေးရဲ့သူငယ်ချင်းက အနောက်ခန်းထဲကနေအော်လိုက်တာကြားရတယ်။ ဟေး!! He was amazed by how good she tasted, her juices running from her soaking pussy onto his tongue. လို့အကျယ်ကြီးအော်လိုက်မိတယ်။ အိပ်ခန်းဝမှာ ဟိုးအရင်ကစွပ်ကျယ်အဖြူလေးဝတ်ထားပီး ထမီအနက်ကလေးကိုခပ်ကျစ်ကျစ်ဝတ်ထားတဲ့ ခါးသေးသေးတင်ကားကားလေးနု့ ကျနော့်ဇနီးလေးက တံခါးဘောင်ကိုလက်ထောက်ပီး မခို့တရို့ပြံုးရင်းရီဝေဝေကြည့်နေတယ်။ ကျနော်တစ်ယောက်ဇောင်းကလွှတ်လိုက်တဲ့မြင်းတစ်ကောင်လိုခုန်ပေါက်ပီးပြေးသွားတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မေ့လျှော့လုမတတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အနမ်းတွေ. အခန်းဝအရောက်မှာတော့မကြီးရဲ့ ခြေလှမ်းတွေတုန့်ခနဲဖြစ်သွားရပါသည်။ ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံတွေက အား. တဲ့ ကျနော့်စက်ဘီးဘောင်တန်းလေးပေါ်တင်ပလွဲထိုင်ပီးလိုက်လာတဲ့အညို့ကို ငုံ့မကြည့်ပဲ ပြံုးနေမယ်ဆိုတာကျနော်သိပါတယ်။ စက်ဘီးကိုဖိနင်းပီးစကားတစ်လုံးမှမပြောဖြစ်ဘူး။ ကျောင်းဝင်းထဲကထွက်လာစရှိသေးတယ် မိုးတွေကခပ်ဖွဲဖွဲရွာချလာပြန်ပီ။ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှီပီးငြိမ်နေတဲ့အညိုက တခစ်ခစ်ရယ်လိုက်ရင်း မိုးရေစက်တွေနဲ့လှနေတဲ့မျက်နာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို အစွမ်းကုန်မော့ပီး အဓိပ္ပါယ်ပါပါကျနော့်ကိုကြည့်ပီး ့. အေး ဆောင်ဆောင့် အားမနာနဲ့ မကြီးခံနိုင်တယ်။ အဲလိုနဲ့ပဲနောက်တော့ တညလုံးပျော်ပါးနေလိုက်တာမိုးလင်းခါနီးမှပဲ လူချင်းခွဲလိုက်ကြပါတော့တယ်။ မနက်လင်းတော့ ဇော်ဇော်တယောက် လေဆိပ်ဆင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါသည်။ မကြီးလည်းနိုးလာပြီး မနက်စာစား ပြီးတဲ့နောက်ဇော်ဇော်ကိုဝိုင်းကူပေးပါသည်။ အထုတ်အပိုးများထည့်နေစဉ်မှာပဲဇော်ဇော်တယောက် လက်အငြိမ်မနေခြေအငြိမ်နေလှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။ ဒီလိုနဲ့ ဇော်ဇော်တယောက်သွားပြီ တပတ် လောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့မကြီးတယောက်လည်း မောင်လေးကိုသတိတရလေးဖြစ်နေရရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမျှော်လင့်မထားတဲ့အလှည့်အပြောင်းလေး တခုကဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲဒါကတော့. .
အဲဒါတော့ဟုတ်တယ်။ ငါလည်းကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကြောက်တယ်ကွ။ ဟုတ်လား ။ မင်းသူ့ကို ရရင်ရောလိုးမလား။ ပြောစမ်း အေးကွာ ရှက်ရှက်နဲ့ ဝန်ခံရရင် ငါလည်းလုပ်ချင်တယ် မောင်နှမချင်းမို့ ကြည့်နေတာ။ တခါတလေ တော့မှန်းပြီး ဂွင်းထုတယ်ကွ ဟိဟိ။ ဟုတ်လားခွေးမသားတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်။ အောင်မာ မင်းကငါ့ကိုလျှောက်မေးနေတယ်။ မင်းကရော မင်းအမကိုချောင်းတယ်မို့လား။ အမှန်အတိုင်းပြောပါ့မယ်ကွာ မင်းလည်းပြောတယ်ဆိုတော့။ ငါတို့မောင်နှမလိုးနေတာကြာပြီဟ ဟေ. ဘယ်သူမှလည်းပြန်မထူးဘူးဗျ။ ဒါနဲ့လွယ်အိပ်ထဲပါလာတဲ့ စကားဝါတံဆိပ်ဆေးပေါ့လိပ်လေးထုတ်ပီးဖွာနေမိတယ်။ ဖတ်ကနဲ ကျနော့်အနောက်ဖက်ကလူရိပ်တွေ့တာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျစ်ဆံမြီး တုတ်တုတ်ကြီးနဲ့အသားအရည်ကအဝါရောင်လဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဗျ။ အရပ်ကလည်းအမြင့်ကြီး၊ အနီရဲရဲထမီလေးဝတ်ထားတယ်။ တော်တော်ကျပ်ကျပ်လေးစည်းထားတော့ခါးလေးကကျင်ကျင်လေးဖြစ်နေတယ်။ ရင်အုံကလည်းတီရှပ်အပြာသေးသေးလေးဝတ်ထားတော့ တော်တော်ကြီးသိသိသာသာဖောင်းကြွနေတယ်။ ကျနော်လည်းကြာကြာငေးလို့မကောင်းတာနဲ့စကားစလိုက်တယ်။ ကျနော်အန်တီဝင်နီ့ဆီ ပီယာနိုတီးသင်မလို့လာတာပါ အမ. အေး ဟုတ်တယ် ငါက သုံးယောက်ပြူး ခံဖူးတယ်ဆိုတော့. ဖေ ပြီးသွားလိမ့်မယ် သမီးတော်တော့ မကြီးတယောက်လည်း အဖေပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးပြင်းပြင်းလေး စုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ မကြာခင်မှာပဲ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး ပြီးသွားပါတော့တယ်။ မကြီးလဲ ပူနွေးငံကျိကျိ သုတ်ရည်တွေကို တရှိုက်မက်မက်မြိုချမိလိုက်ပါတော့သည်။ နောက်တော့မကြီးတယောက် ဖေ့ဘေးမှာ ဝင်လှဲပြီး ပုခုန်းကိုခေါင်းအုန်းရင်း နားနေလိုက်ပါသည်။ အဖေကလည်း မကြီးခေါင်းလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်. တစ်ခုခုတော့မှားနေပီဆိုတာကျနော်သိလိုက်ပီ။ ကျနော့်ကိုကြည့်နေတာက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ ဘူးဆိုတာကျနော်သိတယ်။ သူ့ရင်အစုံကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါဖြစ်သလိုနှိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေတာသိသိသာသာကြီး။ မျက်လုံးတွေကမှေးထားပီးအဖျားတက်နေတဲ့အသံနဲ့ မောင်လေး. မာန်တွေတက်ပီး၂ယောက်သားဇွတ်တွယ်ကြတာ အန်တီလေးဆံပင်ရှည်တွေက အရှေ့ ကိုတွဲလဲကျနေတော့ ဘေစင်ထဲကဆပ်ပြာမြုပ်တွေနဲ့စိုကုန်ပီ။ အားနာလိုက်တာဗျ။ ကန်တော့နော်.
Or are they simply looking foralove story ofamyanmar couple? အစရှိတဲ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေဆိုတာ Rock: သီချင်းလိုတွေနာကျင်ပြင်းရှလွန်းပီး၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရု့ဂန္တဝင်ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ လယ်တောကအပြန် ကဗျာဆိုတာ. ကျနော်ကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့တာကြာပီ။ သူကိုယ်တိုင်လဲအထိနာရှာမယ်။ သူတို့၂ယောက်ဆိုတာ ၁၀နှစ်သမီးလောက်ကထဲကအတူတူနေလာကြတဲ့ညီအမထက် ပိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလေ။ တရက်တော့ကျနော်တစ်ယောက်အန်တီလေးဆီကပြန်အလာ ယူကလစ်ဝင်းထဲဝင်မိတယ်။ ဆင်ဝင်အောက်ကဒန်းကလေးပေါ်မှာ အညိုတစ်ယောက်ထဲထိုင်နေတာတွေ. အသားလာယူနေပြန်ပြီ ကြိုက်လို့ဒီအခြေအနေရောက််နေပြီဟာကို မေးစရာလိုသေးလား ကောင်စုတ်လေးရဲ့။ ကြားချင်လို့ပါ မ ရဲ့ ပြောပါနော်။ ကြိုက်တယ်ဟေ့။ နင်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းလဲပေါင်းမိတတ်တယ်။ အရမ်းအသားယူတဲ့ ဟာတွေ။ ဇော်ဇော်တယောက်စကားပြန်မပြောတော့ပဲ သူ့လီးကြီးကို အဆုံးရောက်အောင် ဆောင့်ချလိုက် ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မှန်မှန်လေး စည်းချက်ကျကျဆောင့်နေပါတော့တယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကလည်းနို့ကြီးနှစ်လုံးကို ညှစ်ချေနေပါသေးတယ်။ တခါတရံမှာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေလိုက်။ ကုန်းပြီးစို့လိုက်။ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းလိုက်နဲ့ အရသာအပြည့်အဝပေးပြီး လိုးနေပါတော့တယ်။ မသီတယောက်လည်း အကောင်းကြီးကောင်းပြီး အဆက်မပြတ်ညီးညူနေမိပါသည်။ အဲလိုအသံလေး တွေကလည်းဇော်ဇော်စိတ်ကိုပိုပြီးတက်ြွကစေတာပေါ့။ အင်း. ကောင်ဆိုးလေး။ မ ရဲ့ ဖင်ကြီးကိုရိုက်ပေးပါ ဇော်ရယ်. မောင့်ကိုသေလောက်အောင်ချစ်တဲ့အရူးမလေး Nyo့ ကျနော့်စိတ်တွေညစ်ညူးသွားတယ်။ လေးကန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ မီးဖိုခန်းဖက်ထွက်လာပီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်၊ရေအေးအေးနဲ့ခေါင်းလောင်းချိုးနေမိတယ်။ နည်းနည်းလေးလန်းသွားတော့ မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်ကအညို့လက်ရာထမင်းကြော်ကို စိတ်မပါလက်မပါဝါးနေရင်း ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတာတွေးရင်းရူးချင်လာတယ်။မီးဖိုပေါ် ကအေးစက်စက်ကော်ဖီကိုပြန်မနွေးတော့ပဲတဂွတ်ဂွတ်သောက်နေမိတယ်။ ရင်တွေပူလိုက်တာဗျာ။ စားသောက်ပီးတာနဲ့မနေ့ကဘောင်းဘီရေစို ကိုလိုက်ရှာတော့ နေရောင်မှာထုတ်လှမ်းထားလို့ခြောက်နေတာတွေ့တော့ကောက်ဝတ်လိုက်ပီး အညို့ဘီရိုထဲကရှပ်တစ်ထည်လောက်ယူ ဝတ်ပီးစက်ဘီးလေးနင်းပီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့မနေ့ညကပြန်မလာလို့ မေမေကဆူနေတာကိုနာရီဝက်လောက်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဖေဖေက ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာ ငွေသွားထုတ်ခိုင်းဖို့ခိုင်းမှအဆူခံလွတ်သွားတော့တယ်။ တနေ့လုံးအိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးနေတော့ သောကတွေပြေပျောက်သွားသလိုပဲ။ သင်္ဘောဆိပ်မှာ ကုန်တွေတင်နေတာကိုတာလီ မှတ်ပေးပီး အိမ်ပြန်လာတော့ညနေပိုင်းရောက်သွားတယ်။ ချွေးတွေပေနေတဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပီးအဝတ်အပေတွေထည့်တဲ့ခြင်းတောင်းထဲပစ်ထည့် ရင်းပူလာလို့မျက်နာကိုရေဆွတ်ရင်းရေအေး အေးတစ်ခွက်လောက်ခပ်သောက်နေမိတယ်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့၃နာရီခွဲနေပီ။ အညို? ဖေ့ အိပ်ပြီလား လို့မေးလိုက်ပါသည်။ အထဲမှာ ဝရုန်းသုန်းကားသံအနည်းငယ်ထွက်လာပြီး အတန်ကြာမှတံခါးလာဖွင့်တဲ့အဖေ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်။ အနည်းငယ်မောဟိုက်နေတဲ့ အနေအထားနဲ့. May 2018: Author Gustav Renneck has passed away.